Famoahana hira mamoafady :: Raikitra ny fitsirihana an'ireo sanganasa manohintohina ny Soatoavina malagasy • AoRaha
Famoahana hira mamoafady Raikitra ny fitsirihana an’ireo sanganasa manohintohina ny Soatoavina malagasy
Mandeha ny sava hao. Taorian’ny hiran’i Rijade, « Drako hely », dia nivoaka indray ny taratasy fampahafantarana sy fangatahana hanesorana horonantsary eo amin’ny tambajotra Facebook sy Youtube avy amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy serasera. Nivantana tany amin’ilay mpanakanto mpanao hira mafana, Zukkie Kardinal, izany fampitandremana izany mba hanesorana avy hatrany ny hira mitondra ny lohateny hoe « Sambora amin’ny bongany », izay efa nihanaka tany amin’ireo tambajotran-tserasera ireo. Efa sokajiana ho mamoafady ary natao ho an’ireo salan-taona mihoatra ny 18 ilay horonantsary navoaka, raha ny fanazavana.
« Fampahatsiahivana ireo lalàna velona no nalefa ary fangatahana ny hanesorana ireo horonantsary tao anatin’ny tambajotran-tserasera sosialy rehetra azon’ny daholobe jerena. Natao hiarovana ny ankizy sy hamerenana am-bala ireo mpanakanto satria tsy mifanaraka amin’ny Soatoavina malagasy ny toy izao », hoy i Fetra Rakotondrasoava, talen’ny fandrindrana ny haino vaky jery ao amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. Tsy mbola nisy aloha ny sazy fa raha minia tsy manaraka ny fanapahan-kevitra kosa ny toeram-pamokarana vao mety handoa onitra roa hatramin’ny fito tapitrisa ariary. « Ny fahitana ireo fihetsika rehetra anatin’ilay horonantsary sy ny tonon’ilay hira no namaritana avy hatrany fa manohintohina ny Soatoavina malagasy, ny resaka fady sy ny maro hafa ilay izy. Fampahatsiahivana ny an’ny minisitera hoe hatraiza ny fetran’ilay fahalalahan’ny mpanakanto. Ny fitsarana irery ihany kosa no afaka manasazy », hoy hatrany ity tale ity.
Ho an’ny mpamokatra sy ny namorona ny hira kosa, raha ny fanazavana natolony teo amin’ny pejy fesibokin’ilay mpanakanto, tsy ataony ho sakana eo amin’ny famoronany ny fanapahan-kevitra toy izao ; ary efa manomana vokatra vaovao be izy ho an’ilay mpanakanto Zukkie Kardinnal sy ireo mpankafy azy.
Fihaonana amin’ny Ghana :: Hiady toerana miaraka amin’ny firenena roa ny Barea
Fanasarahana faritra :: Samy hanana distrika telo avy i Vatovavy sy Fitovinany